यर्मिया 20 ERV-NE - यर्मिया र - Bible Gateway
यर्मिया 19यर्मिया 21
यर्मिया 20 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
यर्मिया र पशूहरू
20 पशहूर नाउँ भएको एकजना पूजाहारी थिए। उनी परमेश्वरको मन्दिरको मुख्य अधिकारी थिए। पशहूर इम्मेरको छोरो थिए। पशहूरले यर्मियाले ती कुराहरू प्रचार गरेका सुने।2यसकारण उसले यर्मिया अगमवक्तलाई कुटे अनि ठिँगुरामा हाले। यो बिन्यामीनको ढोकाको माथिल्लो प्रवेशद्वारमा भएको थियो।3अर्को दिन पशहूरले यर्मियालाई ठिँगुरोबाट मुक्त गरिदिए। तब यर्मियाले पशहूरलाई भने, “परमेश्वरले तिमीलाई दिएको नाउँ पशहूर होइन। अहिले तिमीलाई परमप्रभुले दिनुभएको नाउँ हो, ‘डरले घेरिएको।’4यो तिम्रो नाउँ हो किनभने परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ‘म तिमी स्वयंलाई आतङ्क बनाई दिनेछु। म चाँडै तिम्रा मित्रहरूका निम्ति तिमीलाई एक आतङ्क बनाइदिनेछु। शत्रुहरूले आफ्नो तरवारद्वारा तिम्रा साथीहरूलाई मारिरहेको तिमीहरूले देख्नेछौ म यहूदाका मानिसहरूलाई बाबेलका राजाकहाँ सुम्पने छु। उसले यहूदाका मानिसहरूलाई बाबेलमा अनि सेनाले आफ्ना तरवारहरूले यहूदाका मानिसहरूलाई मार्ने छन्।5शहरका सम्पत्तिहरू, यसका नाफा, सबै बहुमूल्य वस्तुहरू र यहूदाका राजाहरूका सम्पत्तिहरू तिनीहरूकै शत्रुहरूलाई नै दिनेछु। शत्रुहरू यी सबै सम्पत्तिहरू बाबेलको राजधानीमा लानेछन्।6तिमी र तिम्रो घरमा बस्ने मानिसहरू सबैलाई टाढा लगिने छ। तिमीहरूलाई बाबेल राज्यमा जान वाध्य गराइनेछ। अनि तिमीहरू विदेशी राज्यमा मर्नेछौ अनि त्यहाँ तिमीहरू दफ्नाइनेछौ। तिमीले तिम्रा साथीहरूलाई मिथ्या कुराहरू प्रचार गरेकाछौ। तर तिम्रा सारा मित्रहरू पनि मर्नेछन् र बाबेलमा दफन गरिनेछन्।’”
यर्मियाको पाँचौ गुनासो
7 हे परमप्रभु! तपाईंले मलाई धोका दिनुभयो, अनि म धोकामा परे।
तपाईं बलियो हुनुहुन्छ, यसर्थ तपाईंले मलाई जित्नु भयो।
मानिसहरू मलाई देखेर हाँस्छन्।
अनि दिनभरि मलाई हाँसोको पात्र बनाउँछन्।
8 जब जब म बोल्छु, चिच्याउँछु,
म हिंसा र विनाशको विरोधमा चिच्याइरहेछु।
म मानिसहरूलाई त्यो सन्देश भन्छु जुन परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो।
तर मानिसहरूले सधैँ मसित खिसी गर्छन् र मेरो हाँसो उडाउँछन्।
9 कहिले काँही म स्वयंलाई भन्छु,
“म परमप्रभु विषयमा सबै भुल्नेछु
अनि म अब उप्रान्त परमेश्वरको नाउँमा बोल्ने छैन।”
तर जब म त्यसो भन्छु,
परमप्रभुको वचनहरू मेरो हड्डीभित्र
आगो जलिरहे झैं म भित्र बल्छ।
यसले मलाई थकाउँछ अनि म सहन सक्तिनँ।
10 म मेरो विषयमा मानिसहरू
जहीं-तहीं कानेखुशी गरेको सुन्छु,
“चारैतिर आतंक छ!
यो घोषणा गरौं।
मेरा साथीहरू पनि मलाई
भ्रममा पार्न पर्खिरहेका छन्।
यी मानिसहरू भन्छन्
सायद उसलाई छक्काउनु
अनि हामी जित्न सक्छौ।
तब ऊ माथि हामी बद्ला लिनेछौं।”
11 तर परमप्रभु मसँग
बलियो सिपाही जस्तो हुनुहुन्छ।
जो मेरो पछि लागेकाछन्,
अनि मलाई जित्नु सक्ने छैनन्।
तिनीहरू हारको सम्मुख हुनु पर्नेछ,
लज्जित हुनेछन् र यो कहिल्यै भुलिनेछैन।
12 हे सेनाहरूका परमप्रभु! तपाईंले के सही जाँच्नु हुन्छ,
अनि मानिसको इच्छाहरू र हृदयहरूको परीक्षा गर्नुहुन्छ।
मैले तिनीहरूको विरोधमा नालिश प्रश्तुत गरेकोछु।
तिनीहरूमाथि तपाईंको प्रतिकार हेरौं।
13 परमप्रभुको स्तुति गाऊ।
किनभने परमप्रभुले गरीब मानिसहरूलाई
दुष्ट मानिसहरूबाट बचाउँनु हुन्छ।
यर्मियाको छैटौ गुनासो
14 म जन्मेको दिन श्रापित होस्।
त्यो दिनलाई धन्य नमान जुन दिन म आमासँग थिएँ।
15 त्यो मानिस श्रापित होस्
जसले मेरा बाबुलाई म जन्मेको खबर सुनायो
उसले भन्यो, “तिमीले एउटा छोरो पायौ।”
उसले मेरो बाबुलाई अत्यन्त खुशी बनायो
जब उसले मेरो बाबुलाई त्यो खबर सुनायो।
16 त्यो मानिस परमेश्वरले ध्वंस गर्नु भएको शहरहरू जस्तै होस्।
ती शहरहरूमाथि परमप्रभुको दया छैन।
त्यस मानिसले बिहान कष्टको आवाज सुनोस्,
अनि मध्य दिनमा युद्धको चिच्चाहट सुनोस्।
17 किनभने जब म आमाको गर्भमा थिएँ,
त्यस मानिसले मलाई मारेन।
यदि त्यसले मलाई त्यस बेला मारेको भए,
मेरो चिहान मेरी आमाहुनै हुने थिइन्।
अनि म संसारमा जन्मनु पर्ने थिएन।
18 यी सब शोकहरू र सङ्कटहरू भोग्न,
अनि लज्जित भएर दिन बिताउन,
मेरी आमाको गर्भबाट म किन जन्मे?